At Eternity’s Gate (2019) | MM Movie Store
အခြိနျမှားပွီးမှေးဖှားခဲ့တဲ့……….. ခတျေအဆကျဆကျ…တညျမွဲနဦေးမယျ့…………ပနျးခြီကားတို့ရဲ့ ဖနျတီးရှငျ…ဗငျးဆငျ့ဗနျဂိုး…………ဗနျဂိုးဟာ ဒတျချြလူမြိုးပနျးခြီဆရာတဈယောကျပါ……သူ့ရဲ့စိတျခံစားခကျြကို အရောငျမြားနဲ့ဖျောပွတတျသူဖွဈပွီး……သူ့ရဲ့ပနျးခြီကားတှမှော ပွငျးပွတဲ့စိတျဆန်ဒကို ကွကျသီးထဖှယျတှမွေ့ငျရတတျပါတယျ…….
သူဟာပနျးခြီကို အလှနျရူးသှပျသူတဈယောကျဖွဈပွီးအသကျ ၂၇နှဈမှစတငျပွီး ပနျးခြီဆှဲခဲ့တာပါ…..လောကမှ နာမညျအကြျောကွားဆုံးနဲ့ ကံအဆိုးဆုံးပနျးခြီဆရာတဈယောကျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာ အခြိနျမှားပွီးမှေးဖှားလာခဲ့လို့ပါပဲ……
သူ့ခတျေက ပနျးခြီပညာရှငျအမြားစုက သူ့ကို အသိအမှတျမပွုခဲ့ကွပမေယျ့ခတျေသဈပနျးခြီဆရာတှကေတော့ သူ့ပနျးခြီကားတှရေဲ့ထူးခွားခကျြကိုအသိအမှတျမပွုဘဲ မနနေိုငျကွပါဘူး သူ့ပနျးခြီကားတှဟော သူသဆေုံးပွီးနှဈ၃၀ဆယျခနျ့ကွာမှ စတငျနာမညျကြျောကွားလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ
ဘဝတဈလြှောကျလုံး ဆငျးရဲနှမျးပါးစှာနလောခဲ့ရပွီး သသှေားသညျ့တိုငျအောငျသူ့ကို ဘယျသူကမှ အသိအမှတျမပွုခဲ့ပါဘူးဒါပမေယျ့ ၁၀နှဈလုံးလုံး ပနျးခြီဆှဲတဲ့အလုပျကို စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျစှာနဲ့ဇောကျခလြုပျခဲ့ပါတယျ အသကျ ၃၇နှဈမှာသဆေုံးခဲ့ပွီး ………ပနျးခြီဆှဲခဲ့တဲ့ ၁၀နှဈတာ ကာလတဈလြှောကျမှာပနျးခြီကားခပျြပေါငျး ၁၆၀၀ခနျ့ရေးဆှဲခဲ့ပါတယျ
ပနျးခြီကားတိုငျးဟာ သူပွောပွခငျြတဲ့ အကွောငျးအရာတှသေူဖျောပွခငျြတဲ့ စိတျခံစားမှုအခွအေနတှေေ ပွညျ့နှကျနပေါတယျသူအသကျရှငျစဉျကာလတဈလြှောကျမှာ ပနျးခြီကားက ၁ခပျြပဲရောငျးခဲ့ရပါတယျ
အဲ့ဒါတောငျမှ သူ့မိတျဆှနောမညျကွီး ပနျးခြီဆရာတဈယောကျကခငျမငျမှုသဘောနဲ့ဝယျယူခဲ့တာပါ အစမှာပွောခဲ့သလိုပဲသူဟာ အခြိနျမှားပွီး မှေးဖှားလာခဲ့တာပါအခုခြိနျမှာဆိုရငျတော့ သူ မသခေငျကရေးဆှဲခဲ့တဲ့“Portrait of Dr Gachet” ဆိုတဲ့ ပနျးခြီကားဟာ ဒျေါလာ ၁၀၀ မီလီယံကြျောတနျကွေးရှိပါတယျ
ဒါတှကေတော့ ဇာတျကားလေးမကွညျ့ခငျ သိထားသငျ့တဲ့သူ့ရဲ့သနားစဖှယျ ဇာတျကွောငျးလေးတဈခုပါ…….ဒီဇာတျကားလေးထဲမှာတော့ အနုပညာကိုရူးသှပျပွီးသိပျကိုသံယောဇဉျကွီးမားတဲ့ ဗငျဆငျ့ကိုဂရုဏာသကျဖှယျ တှရှေိ့ရမှာပါဒီဇာတျကားလေးဟာ အနုပညာရှငျကွီး ဗငျဆငျ့ဗနျဂိုးရဲ့ အတ်ထုပ်ပတ်တိဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး…
ဒါ့အပွငျ ကမ်ဘာကြျော ပနျးခြီဆရာကွီး ဗငျဆငျ့ဗနျဂိုးရဲ့ အနုပညာအပျေါသဘောထားနဲ့ခိုငျမာတဲ့စိတျဓာတျကို ဒီဇာတျကားထဲမှာ လေးစားဖှယျတှရှေိ့ရမှာပဲဖွဈပါတယျ….
အချိန်မှားပြီးမွေးဖွားခဲ့တဲ့……….. ခေတ်အဆက်ဆက်…တည်မြဲနေဦးမယ့်…………ပန်းချီကားတို့ရဲ့ ဖန်တီးရှင်…ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုး…………ဗန်ဂိုးဟာ ဒတ်ခ်ျလူမျိုးပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ပါ……သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို အရောင်များနဲ့ဖော်ပြတတ်သူဖြစ်ပြီး……သူ့ရဲ့ပန်းချီကားတွေမှာ ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကို ကြက်သီးထဖွယ်တွေ့မြင်ရတတ်ပါတယ်…….
သူဟာပန်းချီကို အလွန်ရူးသွပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအသက် ၂၇နှစ်မှစတင်ပြီး ပန်းချီဆွဲခဲ့တာပါ…..လောကမှ နာမည်အကျော်ကြားဆုံးနဲ့ ကံအဆိုးဆုံးပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာ အချိန်မှားပြီးမွေးဖွားလာခဲ့လို့ပါပဲ……
သူ့ခေတ်က ပန်းချီပညာရှင်အများစုက သူ့ကို အသိအမှတ်မပြုခဲ့ကြပေမယ့်ခေတ်သစ်ပန်းချီဆရာတွေကတော့ သူ့ပန်းချီကားတွေရဲ့ထူးခြားချက်ကိုအသိအမှတ်မပြုဘဲ မနေနိုင်ကြပါဘူး သူ့ပန်းချီကားတွေဟာ သူသေဆုံးပြီးနှစ်၃၀ဆယ်ခန့်ကြာမှ စတင်နာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ဆင်းရဲနွမ်းပါးစွာနေလာခဲ့ရပြီး သေသွားသည့်တိုင်အောင်သူ့ကို ဘယ်သူကမှ အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပါဘူးဒါပေမယ့် ၁၀နှစ်လုံးလုံး ပန်းချီဆွဲတဲ့အလုပ်ကို စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်စွာနဲ့ဇောက်ချလုပ်ခဲ့ပါတယ် အသက် ၃၇နှစ်မှာသေဆုံးခဲ့ပြီး ………ပန်းချီဆွဲခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်တာ ကာလတစ်လျှောက်မှာပန်းချီကားချပ်ပေါင်း ၁၆၀၀ခန့်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်
ပန်းချီကားတိုင်းဟာ သူပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေသူဖော်ပြချင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေတွေ ပြည့်နှက်နေပါတယ်သူအသက်ရှင်စဉ်ကာလတစ်လျှောက်မှာ ပန်းချီကားက ၁ချပ်ပဲရောင်းခဲ့ရပါတယ်
အဲ့ဒါတောင်မှ သူ့မိတ်ဆွေနာမည်ကြီး ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ကခင်မင်မှုသဘောနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တာပါ အစမှာပြောခဲ့သလိုပဲသူဟာ အချိန်မှားပြီး မွေးဖွားလာခဲ့တာပါအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ သူ မသေခင်ကရေးဆွဲခဲ့တဲ့“Portrait of Dr Gachet” ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားဟာ ဒေါ်လာ ၁၀၀ မီလီယံကျော်တန်ကြေးရှိပါတယ်
ဒါတွေကတော့ ဇာတ်ကားလေးမကြည့်ခင် သိထားသင့်တဲ့သူ့ရဲ့သနားစဖွယ် ဇာတ်ကြောင်းလေးတစ်ခုပါ…….ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာတော့ အနုပညာကိုရူးသွပ်ပြီးသိပ်ကိုသံယောဇဉ်ကြီးမားတဲ့ ဗင်ဆင့်ကိုဂရုဏာသက်ဖွယ် တွေ့ရှိရမှာပါဒီဇာတ်ကားလေးဟာ အနုပညာရှင်ကြီး ဗင်ဆင့်ဗန်ဂိုးရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး…
ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာကျော် ပန်းချီဆရာကြီး ဗင်ဆင့်ဗန်ဂိုးရဲ့ အနုပညာအပေါ်သဘောထားနဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ လေးစားဖွယ်တွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်….